Gazety Geo-Engineering & TwinGeo - Fanontana faharoa - Geofumadas
Oktobra, 2019 jeospatial - GIS, Engineering, My egeomates
Niaina fotoana mahaliana tamin'ny fanovana nomerika izahay. Amin'ny fitsipi-pifehezana rehetra, ny fanovana dia mihoatra ny fandaozana tsotra ny taratasy ho amin'ny fanatsorana ny fomba fitadiavana ny fahombiazana sy ny vokatra tsara kokoa. Ny sehatry ny fananganana dia ohatra mahaliana, izay, atosiky ny fandrisihana ho avy tsy ho ela toy ny Internet of Things sy ny tanàna nomerika, dia eo am-pelatanan'ny famerenana amin'ny laoniny ny tenany satria mamela ny fahamatorana BIM mamela azy io.
Ny fanaingoana ny BIM mankany amin'ny haavo 3 dia tena mifameno amin'ny foto-kevitry ny Digital Twins, hany ka somary sarotra ho an'ireo orinasa toa an'i Microsoft ny mahita toerana manararaotra eo amin'ny tsena izay toa an'ny injeniera sy maritrano ihany no teo aloha. Raha ny amiko dia avy amin'ny taranaka iray nahita an'i CAD tonga ho vahaolana amin'ny fanaovana sary mahazatra aho ary sarotra tamiko ny naka modely 3D satria tamin'ny voalohany dia toa manintona kokoa noho ny famoahana mandreraka ny sary nataoko. Ary na dia mino aza izahay fa izay ataontsika ankehitriny miaraka amin'ny Structural Robot, AecoSIM na Synchro no tsara indrindra, raha jerena ny lasa 25 taona lasa izay, dia mandresy lahatra ahy fotsiny fa eo am-piovana isika ho an'ny fitantanana tontolon-kevitra mifangaro kokoa.
... amin'ny fomba Engineering.
Ankehitriny izao toa ny metisy ny Gemini dia toa manondro tsipika hafa amin'ny fomba fiasa amin'ny fahamatorana BIM, mamelona indray ny foto-kevitra taloha antsoina hoe Digital Twins izay orinasa lehibe ao amin'ny orinasa no mandroso mankany amin'ny revolisiona indostrialy fahefatra; ary amin'ny finiavana hanohy ny lohahevitry ny fivoaran'ny Geo-injeniera, amin'ny maha-rakotra tantara dia nanapa-kevitra izahay fa ny BIM amin'ny foto-kevitra sy ny heviny.
Izahay dia mameno ny fanontana miaraka amina ohatra amin'ny fanavaozana ao amin'ny fari-pahaizana momba ny Geo-engineering avy amin'ireo rindrambaiko sy mpanome tolotra. Ireto tranga fanadihadiana sy lahatsoratra manaraka ireto dia miavaka:
Fitantanana fahaiza-manao marani-tsaina, zaridainan'ny siansa Hong Kong mampihatra ny foto-kevitra Digital Twins.
Fanaraha-maso ara-dalàna ny arabe sy ny fotodrafitrasa linear amin'ny alàlan'ny Drone Harmony.
Christine Byrn dia milaza amintsika ny tanàna Digitally Advanced izay mifandray amin'ny fampahalalana azo itokisana amin'ny fotoana sy ny fotoana ilaina.
LandViewer, miaraka amin'ny asany amin'ny fitazonana ny fiovana ao amin'ny navigateur.
Raha momba ny dinidinika dia ahitana fifandraisany amin'ny mpamorona ny Synchro, UAVOS ary ny voalohany an'i José Luis del Moral miaraka amin'ny tetik'asa Prometheus an'ny hakingan-tsaina voajanahary ampiharina amin'ny rafitry ny lalàna.
... amin'ny fomba GEO.
Etsy ankilany, ny fahitana fa mivoaka amin'ny drafitra fandrefesana mahazatra, ary ny fieritreretana ny famahana ny fanamby amin'ny fampifanarahana ny fenitra LADM amin'ny InfraXML dia mahafa-po fotsiny. Ny fanarahana fenitra dia nanjary toy ny kofehy iraisana eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny loharano misokatra, ny sasany ho mpihetsiketsika, ny hafa ho fametraham-pialana izay hitranga na tsy misy azy ireo. Farany ny tombony dia ny traikefa mahomby; Noho izany, eo amin'ny sehatry ny geospatial sy ny fitohizan'ny tsipika Cadastre, dia nampiditra tranga fahombiazana tamin'ny fitantanana ny tany izahay.
Ho fanampin'izany, ny magazine izay manankarena amin'ny horonan-tsary mifangaro sy rohy mifampitohy, dia misy vaovao avy amin'ny Airbus (COD3D), Esri amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Mobileye, Hexagon (Luciad 2019 sy M.App) ary Trimble miaraka amin'ireo serivisy Catalyst.
Amin'ny fitazonana ny fanoloran-tena hanome anay anao tantara mahaliana amin'ny tontolon'ny injeniera Geo, dia faly izahay manolotra anao ny andiany faharoa amin'ny gazetiboky Geo-Engineering ho an'ny Espaniôla ary TwinGeo ho an'ny teny anglisy.
Vakio ny TwinGeo - amin'ny teny anglisy
Vakio Geo-Engineering Engineering - Amin'ny fiteny Espaniôla
Previous Post«Previous Herintaona hafa, dingana iray hafa, traikefa nahafinaritra hafa… Izany no YII2019 ho ahy!
Next Post Konferansa gvSIG iraisam-pirenena faha-15 - andro 1manaraka »